China IDP (Pneumatic Pipe Beveling Machine) abavelisi kunye nabathengisi | Yixin
Lo matshini beveling yahlulwe uhlobo ukwanda lwangaphakathi kunye nohlobo lwangaphandle uqinisa. Isetyenziselwa ukuqhubekeka kobuso obuphukileyo kunye neflethi yombhobho wokuphela kombhobho wobuso ngeemfuno ezahlukeneyo zekona. Inokuqhubekekiswa kwi-U, V kunye nezinye iimilo zejiyometri ngokweemfuno.
Uhlobo ukwanda lwangaphakathi kumbhobho womoya umatshini wokwenza i-beveling usetyenziselwa ukwenza i-beveling yesiphelo sombhobho. Isakhiwo sayo sokwandiswa sigxunyekwe eludongeni lwangaphakathi lombhobho. Uncedo lwayo kukuba inokumiswa ngokuzenzekelayo kwaye igxile, kwaye inokufakwa ngokukhawuleza nangokulula. Isetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zokufakwa kwemibhobho kunye nemisebenzi yokulungisa imeko kaxakeka kwi-petrochemical, igesi yendalo, i-boilers, amandla enyukliya, njl., Kwaye yaphumelela indumiso ngamxhelo mnye ekhaya nakumazwe aphesheya.
1. Inokuqhubekeka ngeevels kunye neeflethi ngobuninzi ngokukhawuleza, ngobomi obude kunye nomgangatho ozinzileyo.
2.Ukusikwa kubanda ngokupheleleyo, kufanelekile ukwenza i-beveling ngezinto ezahlukeneyo, ezinje ngentsimbi engenacici, i-carbon sentsimbi, intsimbi ye-alloy, njl.
3. Ukufakwa ngokulula nangokukhawuleza, ulungelelwaniso oluzenzekelayo lwendawo (kuhlobo lombhobho olwandiswa ngombhobho)
4. Kufanelekile ukuba kulungiswe i-grooves, i-chamfers kunye namalungu athe tyaba kwiindidi ezahlukileyo ezimilise i-V kunye nee-U ezimile, kwaye ikwalungele ukujija ii-flanges kunye neeflethi ezisicaba emva kwentsimbi.
5. Uluhlu lwemitha yombhobho luyahluka kakhulu, kwaye isixhobo esinye sinokuhlangabezana neemfuno zoluhlu olubanzi lweedayimitha zombhobho
6. I-angle ye-bevel inokukhethwa ngokungenasizathu (0-45 degrees)
7.Khaphukhaphu kwaye kulula ukuyiphatha
8. Idrayivu eyahlukeneyo, umbane kunye nomoya womoya
9. Uyilo loyilo lungohlulwa lube lu-T, Y, II uhlobo.
Umoya: Uqhutywa yimoto yomoya, uxinzelelo lokusebenza komoya yi-0.6-1.5Mpa, kunye nokusetyenziswa komoya yi-1000-1500L / min. Ilungele indawo ezinokutsha neziqhushumbayo zomsebenzi.
Uhlobo lweGroove: Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-Y, uhlobo lwekhompawundi, uhlobo lwe-U, uhlobo lwe-J.
Umzekelo Idia efumanekayo. (mm) Ubunzima beGroove (mm) Isantya somsiki (ngomzuzu)
I-IDP-30 d15-D28 ≤6 75
I-IDP-80 d28-D89 15 48
I-IDP-120 d40-D120 15 39
I-IDP-159 d60-D168 15 36
I-IDP-219 d65-D219 15 16
I-IDP-252 d80-D273 15 16
I-IDP-352 d150-D377 15 14
I-IDP-426 d273-D457 15 12
I-IDP-630 d300-D630 15 9
Egqithileyo ODM (OD-Onyuswe Electric Pipe Cutting Kwaye Beveling Machine)
Okulandelayo: I-IDE (Umatshini wombhobho wokwenza umbane)
ODM (OD-Onyuswe Pipe Electric Cutting Ke Wotho ...
ODP (OD-Onyuswe Pneumatic Pipe Cutting And Beve ...